IMacedon Ranges Farmhouse kwi-Mt William Olive Grove
Ibekwe ngaphezulu kweehektare ezingama-200 phakathi kwemithi yomnquma kwiinduli ezintle eziqengqelekayo zeNtaba iWilliam kufutshane neLancefield kwiNgingqi yeWine yaseMacedon Ranges yindawo yethu ethandekayo yokulala emithathu yokulala nesilwanyana sasefama esinombono ophakamileyo phezu kwemithi yomnquma emaphandleni. Ifumaneka kuphela iiyure ezi-1 ukusuka eMelbourne.
Ibandakanya amagumbi okulala ama-3 kunye namagumbi okuhlambela ayi-2 le fama yabucala ilungele izibini kunye neentsapho emva kokuphuncuka kwelizwe elitofotofo kunye nokuphuncuka kokulala abantu aba-6.
Kukho iimbono ezithandekayo zepanoramic ukusuka kwiifestile zendlu onokuzonwabela, indawo enkulu yomlilo evulekileyo yamaplanga kwigumbi lokuhlala elithokomeleyo, itafile yokutyela yezihlalo ezi-8, iiteyidi ezinkulu ezi-2 zangaphandle, ikhitshi elinomtsalane lelizwe elisebenzayo (ikhitshi elinomlilo elidala), indawo yokuhlamba enewasha kunye nesomisi. , air-conditioning, ukufudumeza, ukuvula ngokubanzi iingcango zesitayile sasefrentshi ukusuka kwigumbi lokuphumla kunye nendawo yokutyela.
EMount William Olive Grove siyazingca ngokuvelisa eyona Oli yeOli yeOlive yaseOstreliya igqwesileyo. Imithi yethu yemiNquma ikhuliswe kumhlaba otyebileyo wentaba-mlilo yamandulo ukuvelisa ibhaso lethu eliphumelele iOli zeOlive Eyongeziweyo.
Kunye ne-8,000 yeMithi yemiNquma sikwakhulisa umhlambi weeNkomo ezintle ze-Angus eziMnyama. Ukuhamba ujikeleza ipropathi unokufumana iigusha, iiKangaroos, iiWombats kunye neeFoxes kunye nezinto ezimangalisayo zeentaka ezibandakanya iinkozi, ii-cockatoos ezimnyama, izikhova, iimagpies, irosella, abatya ubusi, iintaka, ii-wrens kunye nongqatyana. Ukuba unethamsanqa usenokubona umhlali wethu uKookaburra uhlala ebonwa engqonge iigadi zendlu yasefama.
Lahla ijethi yethu yabucala phezu kwedama elizele ngamanzi amatsha etrout. Yiza neentonga zakho kunye nomonde njengoko unokutyela kwintlanzi entsha ye-BBQ ngokuhlwa.
Le ndawo yindawo efanelekileyo yokubaleka yeshishini kunye nezempilo, iindwendwe zomtshato, ababhali, ababukele iintaka, abajongi beenkwenkwezi kunye nabathandi bendalo.
Yiza uHlala uphumle kwaye Wonwabele uBubuhle beNdalo beNtaba iWilliam kwiLizwe laseVictoria. Yonwabela iindawo ezininzi zewayini ezipholileyo zemozulu, iimarike zamafama, iivenkile zokutyela kunye nezinto ezinomtsalane zendalo ezikufutshane entliziyweni yeMacedon Ranges kuphela iyure enye ukusuka eMelbourne CBD, 45 mins ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseMelbourne kunye neyure eyi-1 kunye ne-15 mins ukusuka Bendigo. Iilokishi zaseLancefield kunye neKilmore kukuhamba nje okufutshane.
Singaqhagamshelwa ku-0411 237 005 ngalo naluphi na ulwazi olufunayo malunga nepropati, indlu yasefama okanye indawo ekufutshane.